Brezila: Nasian’ny Tondradrano Indray Ny Fari-piadidian’i Santa Catarina · Global Voices teny Malagasy
Brezila: Nasian'ny Tondradrano Indray Ny Fari-piadidian'i Santa Catarina
Nandika (en) i Fernando Sapelli
Voadika ny 18 Septambra 2011 8:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, 繁體中文, 简体中文, Português
Niteraka tondra-drano tany amin'ny tanàna maro tany amin'ny faritra Atsimon'i Brezila indray ny oram-batravatra namely ny fari-piadidian'i Santa Catarina. Hatramin'ny 8 Septambra 2011, dia tondradrano, ranontrambo tampoka sy tany mihotsaka no namely ireo tanàna 96 any amin'ny faritra ary, araka ny lazain'ireo mpampahalàla vaovao mahazatra, manodidina ny 1 tapitrisa ny olona tra-boina.
Tamin'ny 2008, ny fari-piadidiana ao Santa Catarina dia efa nisedra zava-mahatsiravina toy izao, tahaka ny efa nitateran'ny Global Voices azy. Hatramin'io, nisy ny fepetra nandrasana avy amin'ireo tompon'andraikitra mba ho fisorohana, saingy taorian'ny nahafatesana olona telo sy namindràna toerana an'ireo olona maherin'ny 15.000 ho aminà toerana vonjimaika, mazava loatra fa mbola vitsy ny vitany
Romário Badia. Sary avy amin'ny mpampiasa Twitter, Isabela Belli (@belinhaah__)
Ny taànan'i Itajai, iray amin'ireo tena voa mafy, dia nahita izany hoe ny 80% amin'ny foto-drafitrasany an-tanan-dehibe no ao anatin'ny rano vaky avy amin'ny reniranon'i Itajaí-Mirim sy Itajaí-Açu – tsy misy hafa amin'iay loza tamin'ny 2008.
Nampiasa ny fitaovana teo anivon'ny aterineto ireo mpampiasa aterineto mba hanehoana ny hebn'ny fahavoazana. Anatin'ny iray amin'ireo lahatsary nakarina tao amin'ny Youtube tamin'ny 8 Septambra, ny fahasimbàna tao an-tanànan'i Brusque no asehony:
Mponina iray eto amin'ny aterineto no nandrakitra ny vokatr'ilay loza voajanahary tao an-tanànan'i Rio do Sul, iray amin'ireo tanàna tena isan'ny nizaka ny mafy noho ilay oram-batravatra, izay mbola tapaka foana hatreto ny fifandraisany amin'ny faritra hafa:
Blumenau, tanàna lehibe indrindra fahatelo any Santa Catarina, dia nitondra takaitra ihany koa avy amin'ilay oram-batravatra; ity mpampiasa aterineto it dia nandrakitra ny fotoana nanapahan'ny mpamily fiarabe iray hankahatra hisedra ny ranobe avy amin'ny reniranon'i Itajai-Acu, izay vao mainka nitondra fahavoazana be indray aza:
Ireo mpanolotsain'ny tanàna tany amin'ireo faritra tra-boina dia efa anomboka ihany koa nampiasa ny fitaovana teo anivon'ny aterineto mba hanampiana ny mponina ao an-toerana. Tao Itajai, ny bilaogy Desabrigados (TsyMananTrano) [pt] dia noforonina mba hahafahan'ireo mponina manana listra misy ny anaran'ireo olona tsy hita sy ny toerana nialokalofan'izy ireo.
Nahafahana nanomboka ny asa famonjena ny fihenan'ny rotsak'orana, marobe ireo mpampiasa aterineto no nanomboka nihetsika tamin'ny alalan'ny tambajotra sosialy Twitter, nampiasa ny tenifototra #chuvaemSC (#raininSC)
Na teo aza ny fanehoam-piraisankina lehibe teo amin'ireo mponina, nahitàna fiakaran'ny tosi-drà ihany teny amin'ny sasany. Tsy zava-baovao amin-dry zareo Breziliana ny toy izany. Tany amin'ny fiandohan'ny taona 2011, loza voajanahary tahaka izao ihany no efa namely ny faritra manamorona ny tendrombohitra tany Rio de Janeiro, nahafatesana olona 500
Tanaty tatitra iray navoaka [pt] tao amin'ny bilaogin'i Luis Nassif, Sergio Lamarca dia manondro ny firoboroboan'ny fari-ponenana sy ny faritra fanaovana fandraharahana ara-barotra any amin'ireo faritra izay marefo ny fifandanjan'ny natiora sy ny asa fihariana ara-toekarena. Hoy izy manampy misimisy kokoa:
(…) ny fanamby manomboka eto, raha hiatrika tondradrano isan-taona na isaky ny roa taona isika ary hiantona mandritra ny 15 na 20 andro eo ny asa ara-toekarena eto an-toerana, dia heveriko fa ny fandraisana fepetra mialoha. Hanatanterahana izany, tsy maintsy manambatra ny heriny ny fiarahamonina mirindra, anjerimanontolo sy governemanta mba hanome vahaolana ho an'ireo izay hiaina amin'io faritra io ato anatin'ny 30 taona manaraka.